KwiPhepha loLwazi lweNkcubeko kwiWadi yeOta "i-ART bee HIVE" epapashwe nguMbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi, intatheli yewadi "iMitsubachi Corps" iya kugubungela imisebenzi yenkcubeko kunye nezobugcisa!Nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi ukufumana ingxelo okanye ulwazi ngemisebenzi enxulumene nenkcubeko kunye nezobugcisa, ezinje ngeminyhadala yobugcisa, imisebenzi yokukhuthaza ubugcisa, kunye neendawo zobugcisa.
Imagazini yasentwasahlobo: Epreli XNUMX (ulwazi ngo-Epreli-Juni)
Umcimbi wehlobo: Julayi XNUMX (kaJulayi-Septemba ulwazi)
Umba wekwindla: Okthobha 10st (Ulwazi ngo-Okthobha-kaDisemba)
Ubusika: Ngomhla kaJanuwari XNUMX (ngoJanuwari-Matshi ulwazi)
Umhla wokugqibela wokucela ukhuselo kunye nokubonelela ngolwazi
Umba wasentwasahlobo: Phakathi kuJanuwari
Umba wehlobo: Phakathi ku-Epreli
Umba wekwindla: Phakathi kuJulayi
Umcimbi wobusika: Phakathi ku-Okthobha
I-Ota Citizen's Plaza, iOta Citizen's Hall Aplico, Ota Bunkanomori Counter
Ukuthumela kuya kugqitywa emva kwentlanganiso yokuhlela.Kuxhomekeke kumxholo kunye nendawo, sisenokungakwazi ukupapasha.
Ezo zinokuphazamisa imeko yoluntu kunye nesidima sombutho
Ezopolitiko, imisebenzi yenkolo, izimvo kunye noluntu
Nantoni na echasene noluntu kunye nokuziphatha okuhle kunye namasiko
Amashishini aphantsi koMthetho woLawulo lweShishini leMpahla, njlnjl.
Izinto ezingavunyelwanga ngumthetho okanye ezinokwaphula umthetho
Abanye abonwa njengengxaki ethile kumdla woluntu
Imibuzo / Ungeniso
I-146-0092-3 Shimomaruko, Ota-ku, eTokyo 1-3 Ngaphakathi e-Plaza yabemi baseOta
Icandelo lezoBudlelwane baBantu noLuntu, iCandelo lokuPhakamisa ubuGcisa beNkcubeko, uMbutho woKhuthazo lweNkcubeko kwiWadi
Isicelo sokugubungela kunye nokunikezelwa kolwazi
Siza kuqhagamshelana nawe kule dilesi ingezantsi.
Nceda usete le dilesi ilandelayo ukuba ifumaneke kwikhompyuter yakho, iselfowuni, njl., Faka ulwazi oluyimfuneko, kwaye ufake isicelo.
Ubudlelwane nomxholo wesicelo / sokubonelela※
Isazisi sakho Abathathi-nxaxheba Okunye
Imisebenzi / iminyhadala Bonisa umsebenzi Isixhobo Okunye
* Amagama eziganeko, imiboniso eyedwa, njl.
Ikhasi lasekhaya okanye i-URL yomthombo※
Iifoto okanye iincwadana, njl.
Iinkcukacha zakho ozifakayo ziya kusetyenziswa kuphela kwizaziso malunga neli shishini.